Zvinonakidza - Kufamba Kwemhuri | Seymour, IN | Jackson County Vashanyi Center
January 23, 2022 812.524.1914
chii chinoita kuti tive vakakosha
Brownstown Speedway yakavhurwa 1952 pa Highway 250 kuJackson County Fairgrounds, maira imwe kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBrownstown. Nhangemutange dzinoitwa munaKurume kusvika Gumiguru pamakiromita emakiromita ehuvhu oval track uye [...]
Medora Yakafukidzwa Bridge
Medora Yakafukidzwa Bridge, yakavakwa muna 1875 na master builder JJ Daniels, ndiro rakareba kupfuura mamwe mativi matatu akavhara zambuko muUnited States. Inowanikwa padyo neMedora kuEast Fork yeWhite River kubva [...]
Zvakare zvaJohn Mellencamp zvakasimwa zvakasimba muSeymour neJackson County. Mellencamp akaberekerwa pano muna Gumiguru 7, 1951. Anopona kekutanga muspina bifida, Mellencamp akakurira muSeymour uye akapedza kudzidza [...]
Indiana Yakavharwa Bridge Loop
Freeman Mauto Emuchadenga
Inowanikwa pa4784 West State Road 58 muFreetown, iyo miziyamu inhanho yekudzoka munguva yezvakaitika kare kana vagara uye varipo vagari venzvimbo iyi. Veteran nemauto zvigadzirwa, mapikicha echikoro uye [...]
Vallonia uye Driftwood Township yakapfuma munhoroondo uye ndiyo yaive pekutanga kugarwa muJackson County. Iyo Fort Vallonia Museum, iri panzvimbo yenhare yapfuura, yakavakwa muna 1810, inobatsira [...]
Conner Dhinda Museum
Iyo John H. naThomas Conner Museum yeAntique Printing ibasa rekudhinda rinoshanda remuchina wekudhindisa wema1800s, iri panzvimbo yeSouthern Indiana Center yeiyo Arts. Vashanyi vacha [...]
Jackson County Nhoroondo Center
Iyo Jackson County Nhoroondo Center inosanganisira zvese iyo Historical Society uye neGenealogical Society. Iyo Historical Museum yakavhurwa kubva 9 am kusvika 11 am Chipiri neChina uye na [...]
Jackson County Yevashanyi Center Ratidza
Nguva yakapfuura uye yazvino Jackson County inopembererwa nechiratidziro chakavhurwa muna Chivabvu wa2013 kuJackson County Visitor Center. Nzvimbo ine moyo uye nhoroondo zvese zvayo, vashanyi vanorapwa ku [...]
Nhoroondo Downtown Seymour
Meedy W. Shields nemukadzi wake Eliza P. Shields vakanyoresa nzvimbo yeguta reSeymour musi waApril 27, 1852. Guta racho pakutanga rainzi Mules Crossing, asi rakazotumidzwa zita mukuremekedza veruzhinji [...]
Nhoroondo Downtown Brownstown - Ewing
Attractions, Nhoroondo dzePathways
Pasi pechitima Railroad
Shieldstown Yakafukidzwa Bridge
Attractions, Akavharwa Mabhiriji
Shieldstown Covered Bridge yakavakwa muna 1876 ndokudanwa kunzi chigayo chemhuri mumusha wepedyo weShields. Iyo yaidhura $ 13,600 uye iri muenzaniso wekutanga kwezana ramakore rechi19 yematanda [...]
Skyline Drive iri chikamu cheJackson-Washington State Sango. Ndiyo imwe yenzvimbo dzakakwirira kwazvo muJackson County. Kune akatiwandei ekuona nzvimbo kubva pakakwirira pamwe nenzvimbo yepikiniki. [...]
Muscatatuck National Wildlife Refuge yakagadzwa mu1966 senzvimbo yekutizira yekuzorodza nekudyisa nzvimbo dzenzizi dzemvura panguva yekufamba kwegore Nzvimbo yekutizira iri pa7,724 maeka. Mu [...]
Nzara Hollow State Nzvimbo Yekuvaraidza
Starve-Hollow State Nzvimbo Yekuvaraidza inokomberedza angangoita mazana maviri nemakumi masere ekupa mamwe emisasa yakanakisa kumaodzanyemba kweIndiana. Yakavezwa kubva ku280-acre Jackson-Washington State Forest iyo [...]
Jackson-Washington State Sango
Jackson-Washington State Sango rinokomberedza angangoita zviuru gumi nezvisere mumatunhu eJackson neWashington mumoyo wekumaodzanyemba kweIndiana. Sango guru uye nzvimbo yehofisi iri 18,000 kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwe [...]
Pinnacle Peak ipfungwa mumugwagwa kuJackson-Washington State Forest inopa zvinoshamisa maonero.
Kutya Fair - Indiana Inotyisa Haunted Imba inokwezva senge imwe. Yakagadzirirwa pakupera kwevhiki mukudonha, iyi huunt inopa yakanakisa mafaro emwaka. Tarisa uone ese [...]
Racin 'Mason Pizza & Inonakidza Nharaunda
Racin 'Mason Pizza Kunakidzwa Zone inzvimbo yakanaka yekutora vana vevaraidzo. Enda Karts, bhamba mota, girini mwenje mini gorofu, arcade mitambo, bouncy dzimba, chikafu uye zvese zvinonakidza iwe zvaunokwanisa [...]
MaMedora Timberjacks iboka rebasketball semi-nyanzvi sechikamu cheThe Basketball League, ligi rezvikwata makumi mana nemasere muUnited States. Mitambo yepamba inotambwa mujiminasi kuMedora [...]
Seymour Brewing Kambani
Iyo Seymour Brewing Company yakavambwa muna 2017 uye inopa yakanakisa kusarudzwa kwedoro rekugadzira. Iro doro riri mukati meBrooklyn Pizza Company, yakavakirwa padivi peHarmony Park, [...]
Munyu weSalt Creek Winery
Iri mumakomo anotenderera eJackson County uye kumuganhu Hoosier National Sango, Salt Creek Winery yakavambwa muna 2010 naAdrian naNichole Lee. Bhodhoro rega rega rewaini yeSalt Creek rave [...]
Chateau de Pique Winery uye Brewery
Yakamisikidzwa mumapurazi eSeymour, Indiana, Chateau de Pique inomira pakati pemaeka makumi masere enzvimbo yakanaka yekumaruwa. Yakavakirwa mune yakajairika 80th century danga remabhiza, iyo huru [...]